ပြင်ပမြို့ရိုးကိုရေစိုခံတာ | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan -wallpro.com.tw
ရှည်လျားကျဉ်းမြောင်းတဲ့နေ့က-to-နေ့ကအသွင်ပြောင်းပြင်ပမြို့ရိုးကိုအိုမင်းခြင်း, ရုပ်ဆိုးသောမြို့ရိုးအပြင် ပို. အရေးကြီးသောရေယိုစိမ့်၏ပြဿနာ, အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းလှပရင်တောင်ဖြစ်ပါတယ် ပြင်ပမြို့ရိုးကိုရေစိုခံတာ ကောင်းစွာပြုမိသည်မဟုတ်တိုင်းမိုးရွာရွာဝီရိယစိုက်ပြုမိခဲ့ကြကြောင်းအဆိုပါလက်သမား, ဆေးသုတ်, ဝေါလ်ပေပါနဲ့အခြားရေယဉ်အဆောက်အဦးပစ္စည်းများအားလုံးပျက်စီးနေကြတယ်, မြို့ရိုးအသောမြို့ရိုးဟာကင်ဆာပေါက်ကြားပါလိမ့်မယ်။ ပိုမိုလေးနက်, မြို့ရိုးကိုကင်ဆာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်တာမျိုးမိသားစုများ၏ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့်အိမ်၏အပြင်ဘက်မြို့ရိုးအနိပွန်ဗိသုကာကုတ်အင်္ကျီကနေရှေးခယျြထားခြင်းဖြစ်သည်။ အပြင်မြို့ရိုးအနှစ် 20 ကျော်အဘို့ရေစိုခံနဲ့လှပတဲ့ကြောင့်အများဆုံးအကြံပြုနည်းလမ်း, တစ်ချိန်ကအပေါင်းတို့နှင့်အဘို့ဖြစ်၏။
အဆိုပါ tile ကို၏ပြင်ပထရံကိုရေ seepage များသောအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောပြင်ပတန်တိုင်းရိုး၌အက်ကွဲကြောင်း, ထို tile ကိုဒါမှမဟုတ် tile ကို၏ကုန်းမှာရှိတဲ့အက်ကြောင်းအဖြစ်အချက်များကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ, အဆောက်အဦး၏အသွင်အပြင်နှင့်ခြုံငုံအပြင်မြို့ရိုးအများ၏ရေစိုခံအကျိုးသက်ရောက်မှုစဉ်းစား
အိမ်သူအိမ်သားများအပြင်ပန်းရိုး,တိုက်ရိုက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏အခန်းကဏ္ဍသောပြင်ပမြို့ရိုးကိုအဆောက်အဦကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏အာရုံဖြစ်ရပါမည်.အိမ်သူအိမ်သားများအပြင်ထရံရေစိုခံတာနှင့်အသေးစိတ်လောင်သောအသံ၏ပြဿနာကိုလျစ်လျူရှုယိုစိမ့်နေတဲ့အလားအလာဝှက်ထားစိုးရိမ်ရေမှတ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်.ယင်းအိမ်တော်ထရံကိုအက်နေသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်,ချွတ် peeled,မှိုတကျနသော,ရေ seepage,စသည်တို့ကို.,မသာအဆောက်အဦး၏ function ကိုသာသက်ရောက်သည်,ဒါပေမယ့်လည်းအလေးအနက်ထားခြုံငုံအသွင်အပြင်အပေါ်သက်ရောက်မှု.
ထိုင်ဝမ်ရှိအေးမြသောနှင့်မိုးရာသီရာသီဥတုပုံစံ၏မျက်နှာကိုအတွက်,ရေကို seepage ဧရိယာမကြာခဏကျဉ်းမြောင်းနှင့်ရှည်လျားသောကောင်းကင်ပြင်သည်မြို့ရိုး,နှင့်အဆောက်အဦး၏ပြင်ပမြို့ရိုးကိုအက်ထားသည်.ဒါကြောင့်မိုးရွာရွာ၏စဉ်ဆက်မပြတ်တိုက်စားမှုရှိမရှိ,အက်ဆစ်ဓာတ်ငွေ့အစိတ်အပိုင်းများ၏ချေး,ဒါမှမဟုတ်ရာသီနှင့်နေ့ရက်ကိုအပြောင်းအလဲနှင့်ညဉ့်.ရရှိလာတဲ့အပူချိန်ကွာခြားချက်ကိုချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်စာချုပ်ရန်မြို့ရိုးအကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်,တစ်ဦးအက်ကွဲဖွဲ့စည်း,မိုးရာသီအတွက်ကျဉ်းမြောင်းနှင့်ရှည်လျားသောကောင်းကင်ပြာအတွက်ပိုပြီးပြင်းထန်ရေ seepage ပြဿနာကိုဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်အရာ.
နိုင်ရန်အတွက်အိမ်၏အပြင်ပန်းမြို့ရိုးအများ၏ရေစိုခံအရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်,လူအပေါင်းတို့သည်စီမံကိန်းများကိုအခြေခံကုသမှုအနေဖြင့်စတင်ပါရန်လိုအပ်ပါတယ်,ပထမဦးဆုံးအဟောင်းကိုအိုမင်းပြင်ပမြို့ရိုးကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ,ထို့နောက်ပြဿနာသည်မြို့ရိုးမျက်နှာပြင်ပြုပြင်,အိမ်တော်ပြင်ထရံမြို့ရိုးအများအတွက်စံလိုအပ်ချက်များကိုရောက်ရှိသည့်. .ထိုကွောငျ့,ပြင်ပမြို့ရိုးကိုရေစိုခံဆောက်လုပ်ရေး,ပြင်မြို့ရိုးကိုပထမဦးဆုံးတိုးမြှင့်ကြရမည်ဖြစ်သည်နှင့်တည်ငြိမ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး.ခြေရင်းအလွှာလုံလောက်သောရေစိုခံတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိရှိသည်မဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်,ဒါကြောင့်လွယ်လွယ်ကူကူပေါက်နှင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ crack ဖို့စတင်မည်,အဆောက်အဦး၏အပြင်ပန်း finish ကို layer ၏အလှဆင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အကာအကွယ် function ကိုဖကျြဆီးခွငျးနှငျ့အစောပိုငျးပျက်ကွက်ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်အရာ.
ထိုကွောငျ့,ကျနော်တို့နိပွန်ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာ system ကိုချမှတ်,အပြင်မြို့ရိုးကိုရေစိုခံမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ယံပိုင်း,ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများမိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပနံရံများအတှကျအသုံးပွု,ထိုကဲ့သို့သောဘိလပ်မြေမော်တာအဖြစ်,သစ်သားနှင့်သတ္တု,နံရံများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကာကွယ်မှုပေး.၎င်း၏စူပါရာသီဥတုခုခံအချိန်ကြာမြင့်စွာခံနိုင်,လေတိုက်မိုးရွာရွာ alkaline များတ္ထုများ၏တိုက်စားမှုမှုတ်,ထိုသို့ Taishan ကဲ့သို့တည်ငြိမ်.